Jurgen Klopp Oo Been Ku Qabtay Tarjumaan Jarmal Ah Oo U Tarjumayay Henderson & Sida Ay Wax U Dhaceen Oo Faahfaahsan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Jurgen Klopp Oo Been Ku Qabtay Tarjumaan Jarmal Ah Oo U Tarjumayay...
Jurgen Klopp Oo Been Ku Qabtay Tarjumaan Jarmal Ah Oo U Tarjumayay Henderson & Sida Ay Wax U Dhaceen Oo Faahfaahsan
Jurgen Klopp ayaa been ku qabtay tarjumaan isagoo bartanka kaga jiray shirkiisa jaraa’id ka dib markii uu si qaldan u tarjumay hadal uu Jordan Henderson ka yiri kulanka caawa ee Champions League ee ay la ciyaarayaan RB Salzburg.
Henderson iyo Klopp ayaa saxaafada la hadlayay ka hor kulanka muhiimka u ah inay u soo baxaan wareega 16ka ee ay la ciyaarayaan Salzburg iyadoo kabtan Henderson la weydiiyay sida ay Reds u wajihi doonto ciyaarta.
Liverpool ayaa u baahan inay badiso si ay ugu soo baxdo wareega xiga, Klopp ayaana canaantay tarjumaanka markii uu si qaldan u sheegay in Henderson uu yiri: “Liverpool si sahlan ayay u wajaheysaa ciyaarta.”
“Waa doqonimo adigoo tarjumaan ah inuu ku garab fadhiyo tababare ku hadla luqada Jarmalka” ayuu Klopp ku yiri luqada Jarmalka.
“Su’aasha waxay aheyd haddii hanashadeenii Champions League ee sannadkii hore ay ina caawin doonto madaama aan natiijo keenay xaaladahaan oo kale.
“Henderson kama uusan hadli inaan si sahlan ciyaarta u wajaheyno. Waan ka warqabnaa howsha noo taala. Waxa uu ku hadlayaa waxyaabo caadi ah.
“Waa inaad si taxadar leh u dhageysato waxa uu yiri ciyaaryahanka. Haddii kale aniga ayaa tarjumaan u noqonaya. Ma ahan wax sidaas u adag.”
Previous articleTodobo caruur ah oo caano ay cabeen ku sumoobay
Next articleDHAGEYSO: Warka Habeen 10-12-2019
Cristiano Ronaldo Oo Ku Ciyaaray Qorshihii Man United Markii Uu Ku Biiray Real Madrid Bedelkii Uu Ku Biiri Lahaa Barcelona
Kooxda Tottenham oo dooneysa Ciyaaryahan Caan ah
Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa Warsaxaafadeed kasoo saaray heshiiskii doorasho oo ay Muqdisho ku gaareen Madaxweyne Farmaajo, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo...